Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno-jir ah waxaana leeyahay saaxiibo labb iyo dheddig ah oo xadidan.Waxaynu isla qaadanaa wakhtiga baddankiisa.Mid kamid ah wiilasha ayaa marwalba aad iigu soo dhowaada.Anigu ma doonayo.Sideen ugu sheegaa?Anagu waxaynu nahay saaxiibo! – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay gabar 15-sanno-jir ah waxaana jira wiil weyn oo degan deriskayga oona inta baddan raaca tareenka isla wakhtiga aan raaco. Wuu isoo fiiriyaa. Waan ka cabsadaa. Dadka kale waxay igu dhahaan waad in aad ahaatid qof caadi ah.
Next Next post: Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waayihii hore nin ayaa si xun ii dhaawacay. Wuxuu iga qabtay lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonaynin in uu sidaasi ugu sameeyo. Inta baddan weli waan ka fikiraa. Hadda anigu waxaan leeyahay gabar saaxiibtayda ah. Sideen arintaasi ugala hadli karaa?